Cookies & Statistics | Shanyira Hultsfred
musha » Cookies & Statistics
Cookies & StatisticsSebastian Bergström2020-10-26T10:01:12+01:00
Iyi webhusaiti ine zvinonzi zvinonzi makuki.
Sekureva kweElectronic Communications Act, iyo yakatanga kushanda musi wa25 Chikunguru 2003, munhu wese anoshanyira webhusaiti ine makuki anofanirwa kuziviswa kuti webhusaiti iyi ine makuki, izvo makuki aya anoshandiswa uye kuti macookie anogona kudzivirirwa sei. Cookie idiki dhata refaira rinochengetwa nemawebhusaiti pakombuta yako kuti vagone kuziva komputa yako nguva inotevera paunoshanyira webhusaiti. Cookies anoshandiswa pane akawanda mawebhusaiti kupa mushanyi mukana kune akasiyana mabasa. Ruzivo rwuri mukuki runogona kushandiswa kutevera kubhurawuza kwemushandisi. Kuki haidi uye haigone kuparadzira hutachiona hwemakomputa kana imwe software yakaipa.
Cookies anoshandiswa semidziyo, i.e. kuti uzo:
- zvitoro zvekuchengetedza kuti webhusaiti inofanirwa kuratidzwa sei (resolution, mutauro nezvimwe)
Gonesa kunyorera kwekutapurika kwedhata kutenderera paInternet
- gonesa kucherechedza mashandisiro anoita vashandisi webhusaiti uye nekudaro vanounganidza humbowo hwekuti webhusaiti ingavandudzwe zvakadii
- batanidza iko kusangana kwemushandisi kushambadziro pamawebhusaiti kune ake e - commerce transaction sehwaro hwekuverenga muripo ku
iyo webhusaiti uye ad network
- unganidza ruzivo nezve maitiro evashandisi kuitira kuti uchinje uye kugumira zvirimo uye kushambadzira kwemawebhusaiti akashanyirwa kune aya maitiro
Iyi webhusaiti inoshandisa makuki kuyera traffic uye nerubatsiro rwewebhu webhu "Google Analytics" iyo inoshandisa makuki, nhamba dzevashanyi dzinounganidzwa pawebhusaiti. Ruzivo urwu runobva rwashandiswa nechinangwa chekuvandudza zvirimo webhusaiti uye ruzivo rwevashandisi. Cookies anoshandiswa zvakare kupa mushandisi mukana kune iro basa kuti arangarire sarudzo yenyika / mutauro kudzamara nguva inotevera iyo mushanyi paanoshanya neiyo imwechete browser. Cookies anoshandiswawo kurangarira chero kuwanikwa customization.
Cookies nehumwe tekinoroji inochengetwa kana kutora dhata kubva kune komputa yemushandisi ingangoshandiswa chete nemvumo yemushandisi. Mvumo inogona kupihwa nenzira dzakasiyana, semuenzaniso kuburikidza nebrowser. Mune marongero ebrowser, mushandisi anogona kuseta kuti ndeapi makuki anotenderwa, kuvharirwa kana kudzimwa. Verenga zvakawanda nezvekuti izvi zvinoitwa sei mubrowser chikamu chekubatsira uye nerumwe ruzivo ona http://www.minacookies.se/allt-om-cookies/.
Ziva kuti ino webhusaiti inongoshandisa makuki kuita nyore kumushandisi uye kugonesa kushanda kuzere.